Xiriirka Pakistan iyo Afghanistan oo sii xumaaday, xilli Nato isaga baxeyso Afghanistan | Dhacdo
Xiriirka Pakistan iyo Afghanistan oo sii xumaaday, xilli Nato isaga baxeyso Afghanistan
Pakistan ayaa u sheegtay Hoggaanka Afghanistan in aysan sii wadi doonin wada shaqeyntii rasmiga ahayd, ee ay la lahayd Madaxa Amniga Qaranka ee Kabul, sababtuna tahay aflagaadada joogtada ee ka dhanka ah Xukuumadda.
Murankan ayaa mar kale muujinaya xiisadaha siyaasadeed iyo kalsooni la’aanta taariikhiga ah ee raggaadisay xiriirka labadan dal ee deriska ah, ee wadaaga xuduudda dhererkeedu yahay 2,600km.
Xiisaddan cusub ayaa timid, ka dib markii Lataliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani, Hamdullah Mohib, oo si joogto ah ugu eedeeya Pakistan iyo Wakaaladdeeda Sirdoonka in ay taageerto, ayna hagto Ururka Taliban ee Afghanistan, eedeymahan oo ay Islamabad iska fogeysay.
Khudbad uu horraantii bishan ka jeediyay Bariga Gobolka Nangarhar, oo ku yaala xadka labada dal, Mohib kuma ekaan oo keliya eedeymihiisa, balse waxa uu Pakistan ku tilmaamay ‘Hoyga kuwa jirkooda ka ganacsada’.
Hadalkiisan ayaa ka careysiiyay Hoggaamiyeyaasha Pakistan, oo cambaareeyay, kuna sheegay hadalkaasi mid dhaawacay dhammaan ‘Xeerarkii xiriirka labada dal’.
Sarkaal sare oo Pakistani ah oo arrintan la socda, codsadayna in aan magaciisa la adeegsan ayaa u sheegay VOA in dowladdiisa ay Afghanistan u gudbisay ‘Carro xoogan’ oo ku aaddan hadalkii Mohib, oo ay ku tilmaantay mid ‘Ceeb ah’.
Sarkaalkan ayaa sheegay in Islamabad ay u sheegtay Kabul in wixii hadda ka dambeeya aysan wax wadashaqeyn la yeelan doonin Lataliyaha Amniga Qaranka Afghanistan. Waxa ay Pakistan sidoo kale sheegtay in dhanka Afghanistan aysan dhab ka aheyn la macaamilka Pakistan, laakiin keliya ay eedeyso, isla-markaana hoos u dhigto dadaalka daacadda ah ee Pakistan.